Tena mila fanampiana i Comores sy Mozambika taorian'ny rivodoza Kenneth nahafaty olona
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tena mila fanampiana i Comores sy Mozambika taorian'ny rivodoza Kenneth nahafaty olona
Aprily 27, 2019
Ny rivodoza Kenneth dia nirehitra tany Mozambika sy ny Kaomoro any amin'ny Ranomasimbe Indianina androany. Nialokaloka tao amin'ny seranam-piaramanidina Comores sy Fort Ibo ao Mozambika ireo mpizahatany. An'arivony no tavela tsy nahazo trano fialofana.
Ao amin'ny nosy fizahan'i Ibo any Mozambika, 90 isan-jaton'ny trano ho an'ny mponina 6,000 no voaroba. “Tsy ampoiziko ny hahitako ny trano fandraisam-bahiko tsy misy simba,” hoy ny tompon-trano fandraisam-bahiny Soisa Lucie Amr, izay nialokaloka tao amin'ny fort Ibo niaraka tamin'ireo mponina maro teo an-toerana.
Ny mponin'i Mozambika dia mandoa ny vidin'ny fiovan'ny toetr'andro mampidi-doza saingy tsy nanao na inona na inona izy ireo nahatonga an'io krizy io. Ny rano mafana sy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina no anton'ny rivodoza any amin'ny Ranomasimbe Indianina, hatreto dia mbola tsy misy firaketana ny tafiotra roa sahala amin'izany. Mozambika amin'ny vanim-potoana mitovy
Nidina an-tanety ny sokajy fahatelo ny Kenneth cyclone Mozambika amin'ny maha-tafio-drivotra sokajy faha 4 an'i 160 kilometatra isan'ora. Nanafika ny faritany Cabo Delgado any amin'ny morontsiraka avaratra izany tamin'ny alakamisy lasa teo taorian'ny nanesorany ireo nosy Comoros. Io ilay sikilon'ny tropikaly matanjaka indrindra na tany amin'ny tany atsimo atsinanan'i Afrika.
150 000 ny olona ao Comores mila fanampiana lehibe amin'ny maha-olona. 67,800 no zaza (0-17 taona) ary vehivavy 41,800 100. Tombana vonjimaika dia manondro olona XNUMX mahery naratra. Mpamaky iray avy any Comores no nibitsika hoe eTN: mbola tsy nahita firenena nanampy an'i Kaomoro aho. Ny tenantsika ihany no azontsika ianteherana. Aiza ireo mpiara-dia amintsika? Rosia? Arabia Saodita?
Ny isa farany ao amin'ny Mozambika maty farafahakeliny 3 ary mety hiakatra ity isa ity. 16,700 3,500 ny olona traboina, trano efa ho 3 no simba ary hopitaly XNUMX no rava.
Comores tatitra 3 no maty, 100 naratra, olona 20,000 XNUMX no tsy manan-kialofana.
Kômôro, amin'ny fomba ofisialy ny Union of Comoros, dia firenena nosy any amin'ny Ranomasimbe Indianina any amin'ny faran'ny avaratr'i Mozambika Channel eo atsinanan'ny morontsiraka atsinanan'i Afrika eo anelanelan'ny avaratra atsinanan'i Mozambika, ny faritr'i Mayotte ary ny avaratra andrefan'i Madagasikara. Ny renivohitra sy ny tanàna lehibe indrindra ao Kaomoro dia i Môrônia. Ny fivavahan'ny ankamaroan'ny mponina dia Islamo Sunni. Amin'ny 1,660 km2, tsy maningana ny nosy Mayotte izay niady, Comoros no firenena afrikanina kely indrindra isam-paritra. Comores dia ao anatin'ny Fikambanan'ny fizahan-tany ao amin'ny Nosy Vanilla.
Mozambika iFirenena miteny portogey afrikana atsimo izay manana morontsiraka malaza toa an'i Tofo, ary koa valan-dranomasina an-dranomasina ny morontsiraka lava amin'ny Ranomasimbe Indianina. Ao amin'ny Nosin'i Quirimbas, 250km nosy haran-dranomasina, Ivo Island rakotra ala honko dia misy rava tamin'ny andron'ny fanjanahantany velona tamin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Portiogey. Ny Vondronosy Bazaruto lavitra atsimo dia misy vatohara izay miaro ny fiainana an-dranomasina tsy fahita ao anatin'izany ny dugong.
The Birao fizahantany afrikanina Miantso an'i Afrika sy izao tontolo izao ny mpitarika mba hiray hina Mozambika sy Comores. Ny fizahan-tany ao amin'ny Nosy Vanilla dia mpikambana ao amin'ny Birao Fizahan-tany any Afrika, toy izany koa ny Minisiteran'ny fizahantany ho an'i Mozambika.
Ny birao fizahan-tany afrikanina dia nanondro ireo fikambanana mpanao asa soa any an-toerana misy ankoatry ny Vokovoko Mena sy UNICEF. Fanazavana fanampiny kitiho eto
Ny marika fitsangatsanganana tsara indrindra any Moyen Orient dia naseho tamin'ny World Travel Awards ao Abu Dhabi
Hilton Hawaiian Village: Mitokona
Southwest Airlines dia mandefa sidina Hawaii vaovao avy any Las Vegas, Los Angeles, ary Phoenix